सम्पादकको कुर्सीमा प्रवन्धक : पाठक हराए, ग्राहक आए - Jhilko
सम्पादकको कुर्सीमा प्रवन्धक : पाठक हराए, ग्राहक आए
हिन्दुस्थानी पत्रकारितामा आए दिन सम्पादकको कुर्सीमा प्रबन्धक आएको विषय चर्चित छ । नेपाली पत्रकारितामा सिधै सम्पादकको कुर्सीको अधिकार प्रवन्धकले लिएको देखिन्न । तर सम्पादकलाई नै प्रवन्धक बनाउने प्रवृत्ति आमरुपमा छ । पत्रकारितामा देखिएको यो नौलो ‘औपनिवेशक’ चरित्र हो । जसरी आजको विश्व राजनैतिक परिस्थितिमा सिधै उपनिवेश खडा गरिदैन त्यसरी नै पत्रकारितामा पनि सम्पादकलाई नैै प्रबन्धक बनाइन्छ । यसले पत्रकारिता स्वतन्त्र, निश्पक्ष भएको भ्रम दिन पनि मिडियाका कर्पोरेट मालिकलाई सहज भएको छ ।
पत्रकारिता सेवाभावले गरिने सेवा उद्यम अब रहेन । यसको यात्रा व्यवसायिकतासम्ममा सीमित रहदासम्म यसको चरित्र र विशेषता ठीकै हुन्थ्यो । उद्योगमा रुपान्तरण भएपछि यसको चरित्र र विशेषता फेरिनु स्वाभाविक हो । उद्योगको मूल उद्वेश्य नाफा कमाउनको लागि नै हुने भएकोले उसले नोक्सानको कारोबार अवश्य गर्दैन ।
समाचार वस्तु हो ?
प्रवन्धकहरु समाचारलाई विक्रीयोग्य उत्पादन बनाउन चाहन्छन् । जुन घटना सूचना विक्रीयोग्य हुन्छ, त्यस्ता सूचना मात्र प्रकाशनगृहमा कच्चापदार्थको रुपमा भित्रिन्छन् । विक्रीयोग्य नहुने सूचना कुडादानमा फालिन्छन । यतिखेर नेपाली पत्रकारितामा कमैमात्र ‘समाचार’ आउँछन् । मिडियाका उत्पादनहरु मात्र खबरको रुपमा छापिन्छन् । उद्योगको प्रकृति, के उत्पादन गर्ने, सञ्चालकको लक्ष्य, उद्देश्य बमोजिम सञ्चालन भएझै मिडिया उद्योग पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने, शक्ति र पैसा प्राप्त हुने समाचारलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छन् । यहाँ समाचारीय मूल्यको कुनै गुञ्जाइस हुँदैन । तिललाई पहाड बनाउने तर पहाडको उचाई मापन नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । मिडियाले जवर्जस्ती उद्योगको रुप लिँदा देखिएको यो रोग हो । पत्रकारिताको सिद्धान्त अनुसार ‘आवाजविहीनहरुको आवाज’ हुनबाट पत्रकारिता विचलित भएको छ । अपवादमा आवाजविहीनहरुको आवाज आएको त्यो रुपपक्ष वा पत्रकारिताको भाषामा सन्तुलन मिलाउन दिइएको हो । सारमा त्यो पनि विक्रियोग्य छैन भने भट्टीमा पस्न पाउँदैन ।
पाठक बनाम ग्राहक :
यतिखेर नेपाली पत्रकारिताको पाठक पाइन्न । मिडिया उद्योगमा रुपान्तरित हुँदैछ यसर्थ पाठकको ठाउँ ग्राहकले लिएको छ । ग्राहकले कस्तो उत्पादन मन पराउँछ भन्नेमा पनि मिडिया उद्योगको उत्पादन भइरहेको छैन । ग्राहकलाई आफ्नो स्वाद पस्किएर वानी पार्ने उद्यममा लागेको छ । आफ्नो उद्योगको मात्र उत्पादन उपभोग गरोस भन्ने चाहन्छ । यसका लागि मिडिया उद्योगको तामझाम, उत्पादित वस्तुमा रंगरोगन, शैलीगत प्याकेजिङ गरेर बजारमा ल्याइन्छ जसले आम आकर्षण बनोस । कुनै समय थियो नेपालमा एउटै चाउचाउ उद्योग थियो, आज त्यो चाउचाउले बजार पिटेको मात्र छैन, खाजाको विकल्प नै त्यही चाउचाउ भएको छ । कुनाकन्दरा र हरेक वर्गको खाजा त्यही चाउचाउ बनेको छ । हाम्रा खाजाको परम्परागत र स्वस्थ परिकारहरु विस्थापित भइसकेका छन् । जंकफुड खाने बानी नै पारिसकेको छ । यसबाट छुट्कारा पाउन असम्भव जस्तै बनाइदिएको छ । ठूला सञ्चारगृहले पनि आफ्नो ट्रेडमार्कमार्फत आफ्ना उत्पादनलाई पत्रकारिताको दर्जा दिएका छन् । बहुराष्ट्रिय कोकाकोला कम्पनीले ‘चिसो भनेकै कोकाकोला’ भनेर आफ्नो उत्पादनमा आकर्षित गरेजस्तै ।
संकटमा छ साप्ताहिक :
कुनै बेला पत्रिका भनेपछि गोरखापत्र भन्ने बुझिन्थ्यो । त्यसयता लक्ष्यमुखी पत्रकारिता गर्ने थुप्रै साप्ताहिक अखबारहरु पत्रिकाको दर्जामा थिए । आज अब त्यो अवस्था रहेन । साना लगानीका त्यस्ता अखबारहरु घिटघिट गरेर नेपाली पाठकमाझ अस्तित्वमा देखिन्छन् । तर तिनको पहुँच खुम्चिएको छ । कुनै समयमा चितवनको आरक्षमा भएका गैंडा संरक्षणको विज्ञापन आरक्षले गरेझैं ‘संकटमा छ, यो जन्तु’ भनेझैं ।
साना लगानीका यस्ता अखबार सञ्चालनको नाम स्वरोजगारमूलक भएको छ । यो स्वरोजगारमूलक कति प्रतिशत हो ? यसले प्रस्तुत हुने मिडिया कन्टेण्टले दिने सुसूचना कति छ ? कुन वर्ग परिलक्षित छ ? त्यो नहेरी यसलाई स्वरोजगारमूलक भन्नु पनि अनौठो लाग्छ । स्वरोजगारको नाममा यसले दिने प्रभावको विश्लेषण त्यत्तिकै आवश्यक छ । सानो आकारप्रकारको, थोरै जनशक्ति रोजगार भएको, कमै पृष्ठ भएका, व्यक्तिगत लगानी भएकै आधारमा स्वरोजगारमूलक नाम दिनु कठिन हुन्छ ।
स्वरोजगारमुलक नै सही उसले कसको सेवा गरेको छ, त्यो प्रमुख हो । स्वरोजगारमुलकको नाममा कुनै व्यक्ति विशेषको पसिना पुछ्ने, सिँगान पुछ्ने बाँकीको हुर्मत काढ्ने पीत शैलीको पत्रकारिताले पीडा दिने पत्रकारिता हुन सक्तैन । नकारात्मक समाचार नछाप्ने नाममा स्तुती गाउने या यस्तैलाई सकारात्मक पत्रकारिताको नाममा जनजीविका चलाउने पत्रिकालाई कसरी स्वरोजगारको जामा पहि¥याउने ?
आजको आवश्यकता :
सम्पादकको कुर्सीमा सम्पादककै बसेको र पाठकको खोजी गर्ने ग्राहक नबनाउने पत्रकारिता आजको पनि अपरिहार्य आवश्यकता हो । सम्पादकीय स्वतन्त्रता भएको पत्रकारिताले मात्र जनतालाई शिक्षित बनाउँछ, परिवर्तनको जनमत निर्माण गर्छ । राजनैतिक (लोकतान्त्रिक वा साम्यवादी) दर्शनबाट अभिप्रेरित पत्रकारिताको अझै खाँचो छ । देशको राष्ट्रियता, अखण्डता र जनताको हितमा गरिने जनपक्षीय पत्रकारिताले मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्छ । विद्युतीय, नयाँ मिडियामा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।
‘अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गर्नु भनेको नर्कको ढोका खोल्नु हो’
इलाम सदरमुकाममा आज बिहान पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले नयाँ नेपालमा नयाँ व्यवस्था शुरु...
प्रेमको प्रतीक बन्यो रानीमहल
चरम विवादमा लोकसेवा आयोग, यस्तो छ स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र...
उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको दोहोरो भूमिकाथि...